Commonwealth: Waa'ee biyyoota Komanwalzii jedhamanii kana beektuu? - BBC News Afaan Oromoo
Kun wantoota toorba waa'ee gaurmuu biyyoota Commonwealth keessa jiran tarii isin hin beeknedha.
1) Baayyina uummata addunyaa arka sadii keessaa arka tokko ta'u
Namoonni biliyoona 2.4 ta'an uummata addunyaa kan biliyoona 7.4 ta'e keessaa biyyoota Commonwealth 53'n keessa jiraatu. Garri caalaan uummata kanaa ammoo umuriin isaanii waggaa 30 gadidha.
Baayyina uummataan isaan keessaa Indiyaan biyya guddoodha. Biyyatiin kun uummata walakkaa biyyoota Komanwalzii kana qabatti. Miseensonni biyyoota Komanwalzi ta'an 31 ta'an ammoo uummata miliyoona 1.5 ykn isaa gadi ta'e qabu.
2) Miseensonni gariin Impaayera Biriitish ta'anii hin beekan
Ruwaandaan Jarmaniifi Beeljiyeemiin koloneeffatamte malee UKtiin miti
Ruwaandaafi Mozaambik kan isaan miseensa Komanwalzii kana ta'an duraafi duubaan bara 2009 fi 1995'tti ture. Haata'u malee tokkoon isaaniillee kolonii Biriitish jala hin turree heera waliin qabanis hin qaban.
Gareen kun waggoota darban keessa miseensota dhabeera. Rooberti Mugaabeen Zimbaabuweetiin bara 2003 erga filannoo hatuun waliin walqabatee akka miseensummaa irraa ittifamuuf akka dhowwamu gabaafamee keessaa baaseera.
Paakistaan erga bara fonqolcha mootummaa bara 1999 booda keessaa baafamtee booda turtii waggoota afuriifi walakkaan booda itti deebiteetti. Afirkaan Kibbaa qeequmsa biyyoota miseensa Komanwalziitiin imaammatawwan Apartaayidii waliin walqabatee irratti ka'een bara 1961 keessaa baatee turte. Biyyattiin bara 1994 keessa miseensummatti deebite.
Biyyi dhuma kana keessaa baate Maaldievis bara 2016 tti turte.
3) Giiftittiin duree biyyoota 16 qofadha
Biyyoonni Komanwalzii garri caalan rippabilika yommuu ta'an ja'an isaanii - Lesoottoo, Siwaaziilaandi, Birunii, Daruselaam, Maleeshiyaafi Tongaan sirna monaarkii mataa isaanii ta'e qabu.
Tongaan mootii ofiisaanii qabu
4) Ballinas qaba
Komanwalziin ballina lafaa arka afur keessaa arka tokko qabata.
Isaan keessaa baayyee guddoon Kanaadaadha. Kanaadaan ballina lafaatiin akka addunyaatti lammaffaadha. Indiyaafi Awustiraaliyaanille gurguddoodha. Biyyoonni baayyeen garuu xixiqqoodha - warri akka biyyoota odola Paasfik, Naawuraa, Samowaa, Tuvaaluufi Vanuwaatuufi Dominikaafi Antiguwaafi Baarbuudaa warri Karibiyaan keessa jiranis keessatti argamu.
Fuullee bareedaa Kanaadaa keessatti
5) Maqaa isaa jijjiirrateera
Gaggessitoonni mootota Komanwalzi bara 1969 keessa Landanitti walga'aniiru
Commonwealth kan ammayyaa bara 1949 keessa hundeeffame. Nama lama qofatu gaggeessaa garee kana ta'e. Isaanis: Kiingi Joorji VI fi Giiftii Elizaaabeet II.
Miseensonni hundeessitoonni Komanwalzii Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Indiyaa, Niiwuu Ziilaandii, Paakistaan, Afirkaa Kibbaa, Siri Laankaafi Yuunaayitid Kingoem, kan jedhaman dura "bilisaan walitti dhufuu" biyyoota walaba ta'anii.
Hanga Chaarterii isaa bara 2012 hundeeffatutti heer hin qabu ture Komanwalziin. Chaarterichis dudhaalee 16 dimokiraasii, walqixxummaa saalaa, guddina walitti fufinsa qabuufi nagaafi tasgabbii akka addunyaatti fiduuf kan waliin waadaa itti galanidha.
Deggertoonni Garee kanaa faayidaawwan miseensaaf ijaaramni kun qabu misoomaan waldeggeruufi galmawwan addunyaarratti waltumsuu.
6) UK hanga ammaatti dinagdeetii hunda caalti...
Indiyaan tokkoffaa fudhachuuf deemti, tarii dhuma bara kanaarra.
7) Commonwealth tokkoo olitu jiru
Komanwalzii biyyoota bilisaa dhiyeenya kana Belaarusitti walga'an
Zimbaabuween waggaa 15 dura ture garee amma na deebisaa jettu keessaa kan baate.